Tranonkala fito miondana amin'ny Internet ao amin'ny Internet - Fanehoan-kevitry ny Semalt Expert
Azo jerena ao amin'ny tranonkala manokana scrapers. Azonao atao ny manoratra na mametaka rakitra mahasoa ao amin'ny Word Document na mametaka programa fandinganana tranokala napetraka ao amin'ny milina. Na inona na inona safidinao, dia hanana fahafahana miditra amin'ny lahatsoratra sy sary tianao ianao. Ny rindrambaiko manala ny tranonkala dia mameno sy mamoaka ny angona avy amin'ny tranonkala maro mifototra amin'ny zavatra takinao. Ny sasany amin'ireo fandaharana tsara sy mahasoa indrindra dia voalaza etsy ambany.
Amin'ny fampiasana ity rindrambaiko tranonkala ity, dia afaka mamonjy mora foana ny angon-drakitrao ianao amin'ny endrika CSV rakitra na mahazo ireo doka alefa any amin'ny fitaovana an-tserasera na tranonkala. Tena ilaina ity fitaovana ity mba hisintonana sary avy amin'ny tranonkala mavesatra ary miasa amin'ny toetr'andro, dia misy sy mandeha amin'ny hotely, ary mamoaka ny angon-drakitra ao anatin'ny segondra.
2. Tranon'ny tranonkala tranokala:
Ity dia iray amin'ireo programa maoderina matanjaka be indrindra. Tsy misy vidiny izany ary mamorona antontan-taratasim-baovao tsara sy voalamina ho anao. Ny ampahany tsara indrindra dia ny fahafahana manampy amin'ny famoahana votoaty avy amin'ny rindrambaiko isan-karazany ary hampiova azy ho endrika format JSON, spreadsheets, ary Linq codes.
Ny CatchPage dia miasa tsara ho an'ireo mpandrindra programa sy tsy programmiera ary tsy mila anao ny mandoa betsaka noho ny dikan-dikan-dohany voalohany..Izy io no iray amin'ireo programa maoderina matanjaka indrindra izay manangona angon-drakitra avy amin'ny pejin'ny jiro, fotsy fotsy, ary ny torolàlana goavana tsy misy olana.
4. Craigslist Web and Email Extractor:
Ny dikan-teny maimaim-poana an'ity tranonkala ity dia nampiasain'ireo mpikaroka momba ny media sosialy, ireo manam-pahaizana SEO, ary ireo fikambanana lehibe. Afaka mahazo angon-drakitra ianao raha tsy manahy momba ny kalitaony. Ny tranokala Craigslist web and mail extractor dia tsara ho an'ny tranokala sy mailaka rehetra ary afaka mamoaka ny lahatsoratra sy sary rehetra ilaina mandritra ny ora maro.
5. Maka any amin'ny toerana rehetra:
Raha reraka amin'ny fandaharana mahazatra amin'ny tranonkala nentim-paharazana ianao, ary mazoto mitady vahaolana hafa, na aiza na aiza. Io no iray amin'ireo programa matanjaka indrindra ary manampy amin'ny fanangonana, fandaminana ary fananganana ireo angon-drakitra na inona na inona ny habetsahany sy ny hamafiny. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity, azonao atao ny mahazo ny angon-kevitra tianao ao anatin'ny segondra fa tsy ora. Noho izany dia mamonjy ny fotoananao sy ny herinao ary manome ny valiny marina indrindra.
6. Fandefasam-peo E-mail sy Web Scraper:
Ny E-mail sy ny Web Scraper dia mamela ny adiresy mailaka rehetra sy ny votoatin'ny tranonkala rehetra, ary azonao atao ny mamaky sy mametaka ireo rakitra ao amin'ny rakitra Word anao. Azonao atao koa ny manangona tahiry CSV, PDF sy tahiry XML ho anao ao amin'ny tahiry manokana, izay azonao hiditra raha ilaina.
FMiner dia maimaim-poana ary iray amin'ireo rindrambaiko maherifo mafonja indrindra, fitrandrahana ny tranonkala, fanangona ny tranokala, fandikana tranonkala sy fandaharana miboridana. Azonao atao ny mampiasa azy io ho toy ny fototry ny maso lehibe indrindra amin'ny Internet satria ity fitaovana ity dia mamoaka lahatsoratra sy sary. Afaka mamoaka votoaty tena ilaina avy amin'ny horonan-tsary izy ary afaka manao asa samihafa ao anatin'ny minitra vitsy. Ny ampahany tsara indrindra dia ny hamerenany ny angon-drakitra ao amin'ny sehatry ny fitaovana orin-tsofiny na mandefa azy ao amin'ny milina Source .